UPDATE: Ciidamada Militariga Itoobiya oo ku sii qul-qulaya magaalada Dhuusamareeb (Maxaa cusub?) | HalQaran.com
Ciidamada Militariga ee Itoobiya
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Ciidamada Militariga Itoobiya oo aan qayb ka ahayn Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ay gaareen magaaladaasi.
Ciidamadan oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan, watana gaadiidka xamuulka ciidamada ee Uraalaha loo yaqaano ayaa waxay gaareen Garoonka Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb, iyagoo ku biiraya Ciidamadii Jabuuti ee halkaasi ku sugnaa.
Xog ay helayso Halqaran.com ayaa sheegaya, in ciidan kale oo Itoobiyaan ah ay ku wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb, si ay amniga magaalada u xoojiyaan.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida iyo Sirdoonka Qaranka (NISA) uu ku wajahan yahay Magaalada Dhuusamareeb, xilli aan la aqoon ujeedada uu u tegaayo.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay dareen ka muujinaysaa inay Ahlu Sunna caqabad ku noqoto amniga Magaalada Dhuusamareeb iyo Doorashooyinka Baarlamaanka iyo Madaxtooyada ee Galmudug.
Madaxda Ahlu Sunna ayaa waxay dhawaan iska diideen in ay ka qayb qaataan dhismaha Galmudug-ta cusub, sababo ku aadan, iyagoo ku andacoonaya Dowladda Soomaaliya oo aan meelmarin heshiiskii ay bartamihii sanadkan wada gaareen.
Ahlu Sunada Galmudug ayaan weli qaadin tallaabooyin liddi ku ah dhismaha Galmudug-ta cusub, waxaana meesha laga saari karin suurta-galnimada inay caqabad ku noqon karto dhismaha maamulkaasi.
Ahlu Sunna oo laga cabsi qabo inay
Ciidamada militariga Itoobiya oo gaaray Dhuusamareeb
Dowladda Soomaaliya iyo Galmudug